मायानगरीको माया- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
माघ २४, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — धेरै हिसाबले सम्भावना र अवसरको थलो मानिन्छ सहरलाई । गाउँको तुलनामा सहज जिन्दगी, सुविधा अनि रोजगारीका अनेक अवसर । तर के थुप्रै सपना बुनेर काठमाडौं पस्नेहरूका लागि यो सहर सोचेजस्तो छ ? उनीहरूका समस्या कस्ता छन् ? मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको ‘स्वप्निल स्वप्न–नगरी’ ले यस्तै समस्याहरूलाई केलाउन खोजेको छ ।
राजधानीको अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको नाटक ‘स्वप्निल स्वप्न–नगरी’ मा कलाकारहरू । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुुर
प्रदीपकुमार चौधरीको लेखन र विकास जोशीको निर्देशन रहेको नाटक खासगरी सहर पस्ने युवाहरूको कथाव्यथा र सहरमा गर्ने उनीहरूको संघर्षमा केन्द्रित छ ।
काठमाडौंलाई लोकेसन बनाएको भए पनि नाटकले आम रूपमा युवाहरूकै सपना र समस्या उठाउन खोजेको छ । संघीयतामा मुलुक गएको केही समय मात्रै भयो । अहिले पनि आम मनोविज्ञानमा ‘काठमाडौं नै अवसरहरूको केन्द्र’ हो ।
नाटककार प्रदीप स्वयं मोफसलबाट आएर काठमाडौंमा संघर्ष गरिरहेको कारण पनि एक प्रकारले यो नाटक उनकै पुस्ताको कथा हो । यतिसम्म कि सहरबाट अवसरहरू गाउँतिर सोझिएको भएपनि ‘मायानगर’ रूपी काठमाडौंमा फसेकाहरू गाउँ फर्किन तयार छैनन् । उनीहरू एउटा अवस्था, हीनताबोध, समस्या र सपनाहरूको गन्जागोलमा छोपिएका छन् ।
कोही रेस्टुरेन्ट खोल्ने सपना देख्छन् नाटकमा, कोही ज्याला मजदुरीमा अल्झेका छन्, कोही विदेश जाने चक्करमा फसेका छन् त कोही मुलुक फर्केर केही गर्छु भन्ने सपना देखिरहेका छन् । यिनै युवाहरूको समस्या र संघर्षका साथ नाटक अघि बढ्छ ।
बेरोजगारीको समस्या, भ्रष्ट राज्य संयन्त्रदेखि निम्नवर्गीय मजदुरका दु:ख पीडासम्मका विषय समातेको नाटकमा बहुरेखीय कथाहरू भेटिन्छन् । एउटै कथावस्तु र सरल रेखामा नाटक बगेको छैन । यसले समस्याको विविधता झल्काउँछ ।
नाटक मण्डला थिएटरको प्रशिक्षार्थी समूह (ल्याब सेभेन) का कलाकारहरूले तयार पारेका हुन् । बिना कार्की, छेजिङ जेवा भुटिया, आकाश झा, अभिषेक शर्मा, डेविड सुवेदी, ज्ञानेन्द्र भट्टराई, प्रकाश भट्टराई, रितु पौडेल, केशव अधिकारीलगायतले अभिनय गरेका छन् ।
माघ ११ देखि नियमित मञ्चनमा आएको नाटक आउँदो आइतबारसम्म देखाइनेछ ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०८:३४
लेखक फुरूक्क, निर्देशक ढुक्क
काठमाडौँ — सुविन भट्टराईलाई उपन्यासकारका रूपमा चिनाएको थियो, ‘समर लभ’ ले । खासगरी युवा पाठकमाझ । सोही कृतिमा आधारित रही मुस्कान ढकालले निर्देशन गरेको फिल्म ‘समर लभ’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउने तरखरमा छ ।
‘समर लभ’ लेखक सुविन भट्टराई र फिल्म निर्देशक मुस्कान ढकाल ।
यति बेला सबैभन्दा बेचैनी कसैलाई भए सुविनलाई नै होला । टेलर हेरेर खासै उत्साहित नभएका उनी फिल्म हेरेपछि भने फुरुक्क परेछन् ।
‘अढाई घण्टाको फिल्ममा पूरा उपन्यास अटाउन सम्भव नहुँदो रहेछ,’ हालैको भेटमा भट्टराईले भने, ‘तर उपन्यासको मर्मलाई फिल्मले त्यति धेरै मर्न दिएको छैन ।’ उनले फिल्म आशा गरेभन्दा माथि बनेको टिप्पणी गर्दै थपे, ‘इंगेजिङ, इन्टरटेनिङ र इमोसनल यी तीन चीजलाई फिल्मले कतै पनि छुटाएको छैन । बाँकी अरू कतिपय कुरामा असमझदारी अहिले पनि छ । फिल्म हेरिसकेपछि भने प्रसन्न छु । लेखकका नाताले मैले लेखेका कतिपय कुरा फिल्ममा ठ्याक्कै आएका छन् । इमोसनल पार्टमा मेरा आँखा पनि लगभग रसाए ।’
फिल्मको टेलर आएपछि आफ्ना पाठकको प्रतिक्रिया सकारात्मक पाएका छैनन् भट्टराईले । ‘मेरै रेस्पोन्स राम्रो थिएन । क्यारेक्टर भएन, एक्टिङ भएन, एक्सप्रेसन भएन भन्ने जस्ता कमीकमजोरी मेरा पाठकले औंल्याउनुभएको छ । मेरो धारणा पनि त्यही थियो । तर फिल्म हेरेपछि त्यो धारणामा म अलिकति परिवर्तन भएँ,’ फिल्मको पटकथामा समेत सहयोग गरेका उनले भने, ‘फिल्मप्रति अलिकति पोजिटिभ भएको छु ।’
लेखकसँगै रहेका निर्देशक ढकालले भने चर्चा बटुलिसकेको कथामा फिल्म बनाउनु साँच्चै गाह्रो काम भएको सुनाए । तैपनि फिल्मले दर्शकलाई निराश नबनाउनेमा उनी आशावादी छन् । ‘कुनै चर्चित कृतिमा फिल्म बनाउनु धेरै नै गाह्रो काम रहेछ,’ उनले भने, ‘धेरैले पढेको र रुचाएको पुस्तकबारे धेरै थाहा हुन्छ । तर मैले पुस्तकलाई फिल्ममा ठ्याक्कै उतारेको छु भन्ने लाग्छ ।’ त्यसो भए ‘समर लभ’ नै किन ताके त उनले ? उनी जवाफिए, “समर लभ’ भन्दा राम्रा उपन्यास अरू पनि नभएका हैनन्, तर फिल्मका लागि यसैलाई छान्नुको पछाडि यो बढी क्याजुअल भएर हो । सयौं वर्षअघिका कुरा देखाउनभन्दा क्याजुअल कुरा देखाउन सजिलोहुने भएकोले यसलाई छानेको हुँ ।यो उपन्यासमा आम मानिसको जीवनशैली छ ।’
फिल्मलाई सम्पादन टेबलमा हेरिसकेपछि भट्टराईलाई फेरि त्रिवि परिसर घुम्न मन लागेको रहेछ । भने, ‘पुस्तक पढेपछि पाठकलाई टीयू घुम्नै पर्छ भन्ने भाव पैदा भएजस्तै फिल्म हेरेपछि मलाई पनि त्यही भयो । फिल्म हेरेर पग्लिहाल्ने, रोइहाल्ने मान्छे त म हैन, तर यो हेर्दा त्यस्तो भएको छ ।’
अझै पनि भट्टराई आफ्ना पात्र अतीत र सायामा अभिनीत कलाकारलाई लिएर ‘डाउट’ नै छन् । ‘किताबकै जस्तै ठ्याक्कै भेटे कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने त लाग्छ, लेखकका हिसाबले त्यो स्वाभाविक पनि होला, तर फिल्म हेरिसकेपछि भने यो कास्टिङ पनि राम्रो छ भन्नेमा पुगेको छु,’ उनले भने । फिल्ममा अतीत शर्माको भूमिकामा आशिष पिया र साया शाक्यको भूमिकामा रेवती क्षत्रीले अभिनय गरेका छन् । दुवैका लागि ‘समर लभ’ पहिलो फिल्म हो ।
भट्टराई ‘समर लभ’ का पाठकले भन्दा उपन्यास नपढेका दर्शकले फिल्म बढी रुचाउने ठान्छन् । पाठकका लागि फिल्म जजमेन्टल हुन सक्ने उनको धारणा छ । भने ‘कमीकमजोरी खोज्ने र तुलना गर्ने हुन सक्छ । यहाँ यो दृश्य आएन भन्ने हुन सक्छ । पुस्तकका कति दृश्य फिल्ममा अटाएका छैनन् । सबै अटाउनुपर्छ भन्नु मूर्खता पनि हो । तैपनि फिल्म त राम्रै बनेछ है भन्ने उहाँहरूलाई पनि लाग्छ । पुस्तक नपढेकाहरूले भने निश्चय पनि बढी रमाइलो मान्नुहुनेछ ।’
प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०८:३३
सामान्य कथामा अब्बल
‘कबड्डी' मा कर्मा र उपाशना